China EAS Security Security AM 58khz EAS Anti System System Clothing Stores Antenna-PG218 manufacturers na suppliers | Etagtron
EAS Security Security AM 58khz EAS Anti System System Clothing Stores Antenna-PG218
Sistemụ EAS a bụ teknụzụ AM 58KHz na njirimara nke mkpuchi nchọpụta obosara (ruo 2.5 m) na nnukwu uche. Ọdịdị ya na-emeghe ma na-emeghe ya dabara adaba maka imepụta ụlọ ahịa na-ewepụta nchekasị nke ịdị mfe na ntụkwasị obi maka ihe ngwọta EAS na-adọrọ adọrọ.Ihe nkọwapụta
Nọmba nlereanya: PG218
:Dị: EAS AM system
Dimension: 1500 * 340 * 20MM
Volta ọrụ: 110 ~ 230V 50 ~ 60HZ
Ulo olu Shop mkpu Anti-ezu ohi EAS System
•Njirimara usoro ihe omuma okike, jiri uzo acrylic. Guzosie ike, inogide, mara mma.
•Ezigbo obi jụrụ maka oghere mkpuchi isi, ikpo ọkụ ọkụ ngwa ngwa. Nwere ike ịdị ezigbo mma iji megharịa ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị elu.
•Ike mgbochi nnyonye anya, nkwụsi ike dị elu, arụmọrụ zuru oke na saịtị
•Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ahịa, ụlọ ahịa ejiji, ụlọ ahịa uwe elu, na ihe ndị ọzọ
EAS AM Sistemụ-PG218
0.6-2.5m (depneds na mkpado & enviornment na saịtị)
Nna ukwu + Ohu
Isi nkọwa nke ụlọ ahịa nchekwa ihe nchekwa ihe mmetụta:
1.Transparent Isi nke magburu onwe looking.The acrylic ihe nke a AM usoro na-eme ka ọ nke uzo elu na ahụ, nke bụ nnọọ elu àgwà na mma na-achọ. A na-anabata ya nke ọma ma jiri ya na ụlọ ahịa akwa dị iche iche, ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ na ụlọ ahịa ndị ọzọ.
2.Excellent Alarming Function With Elegant Design.The elu ọgwụgwụ na-achọ nke a EAS AM usoro ọnụ ụzọ ámá na-enyere onwe ya ga-eji maka ụfọdụ elu ọgwụgwụ retail ụdị. Nchọpụta ọrụ dị mma ma ọnụahịa echekwa. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma na-ere mgbochi na-ere usoro EAS na ụlọ ọrụ anyị.
3.A na-eji usoro AM 58KHz EAS eme ihe maka ụlọ ahịa uwe, ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ, ụlọ ahịa akpa, ụlọ ahịa obere akpa, storeslọ ahịa egwuregwu, ụlọ ahịa akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ahịa ndị ọzọ. Nnukwu uche na ịrụ ọrụ dị egwu na-eme ka ọnụ ụzọ mpi mpi sistemụ rụọ ọrụ ma dabara maka ụdị mkpado na akara aha EAS niile.
Ahaziri Logo na isi mkpuchi
Hazie akara gị ka ọ mara mma.
Ebube acrylic dị mma, mara mma na nghọta
Inye ihe nlere anya megide ohi
♦Maka akara ngosi AM dị nro, nchọpụta nchọpụta bụ 0.6-0.8m na sistemụ otu; maka akara AM siri ike, ụdị nchọpụta bụ 0.9-1.2m na sistemụ otu mpempe. Enwere ike itinye usoro ọzọ n'ọtụtụ ụzọ dị anya.
1. Ike 220V AC nke antenna niile ga-abụrịrị otu ụzọ.
2. E kwesịghị inwe nnukwu ihe ọla n’ime 1.5m gburugburu sistemụ.
3. Ebe dị anya n'etiti ntinye decoder kwesịrị ịdị karịa 1.5m site na sistemụ ahụ.
4. Ntinye akụrụngwa kwesịrị ịdị ka o kwere mee site na ndị na-arị elu na ndị mbuli elu.
5. E kewara akụrụngwa ụzọ abụọ: otu nna ukwu na ohu ahụ; nna ya ukwu bụ mpi mkpu, ma gosipụta ihe ngosi ọkụ karịa ike ọkọnọ. Ohu ahụ bụ mpi ahụ na nso nso nchọpụta ya ma enweghị ọrụ mkpu.
Nke gara aga: EAS Retail Store 58khz AM Ulo olu Shop mkpu Anti-ezu ohi Aystem Gate-PT309
Osote: EAS Antenna AM System Acrylic High quality eas 58KHz Clothing Store Security Gate-PG212A
EAS usoro AM System Acryli High quality eas 5 ...
EAS Retail Store 58khz AM Ulo Shop mkpu A ...